Kulan Lagu Qiimaynayay Hogaanada Nabadagalyada Degmooyinka iyo Maamulada Magaalooyinka oo Jigjiga Kadhacay - Jigjiga Online
HomeSomalidaKulan Lagu Qiimaynayay Hogaanada Nabadagalyada Degmooyinka iyo Maamulada Magaalooyinka oo Jigjiga Kadhacay
Jigjiga (JigjigaOnline) – Kulan baladhan oo lagu qiimaynayay hogaanada Nabadagalyada 93da degmo iyo 6da maamul magalo ayaa kadhacday hoolka shirarka ee xarunta madaxtooyada DDS,waxana kasoo qaybgalay kulankan oo bilaabmay saaka 8.30kii subaxnimo madaxwayne kuxigeenka DDS mundane Aadan Faarax,masuuliyiinta xafiiska nabadgalyada DDS oo uu ugu horeeyo hogaanka nabadgalyada DDS mudane Cabdi-caadil Xasan iyo masuuliyiin kale oo heer deegaan ah.
Kulankan ayaa waxaa ugu horayntii lagu dhagaystay warbixinta waxqabadka hogaanminta Kulanka Kasoo Qaybgashay iyadoo laga duulayo waxqabadka hogaanlasta , dhaliilaha iyo doorka shaqsi waliba ku leeyahay nabadgalyada deegaanka.
Waxaana si qoto dheer qiimaynta loogu lafo gurayay waxkaqabashada arimaha amaanka sida ladagaalanka hubka sharcidarada ah,deegaamaynta cusub ee khilaafaadka sabobaysa, iskudhaca bulshada rayidka ah iyo sababaha keenaya,iyo xaalada dhaq-dhaqaaqyada nabadgalyo ee degmooyinka iyo maamul magaalooyinka.
Intii uu kulankani qiimaynta ahaa socdayna waxaa la isla gorfeeyay ka foojignaanta kooxaha argagaxisada sida Al-Shabaab iyo in la adkeeyo amaanka guud islamarkaana laxoojiyo wada shaqaynta haayadaha amaanka deegaanka iyo kuwa dalkaba.
Kulankan oo laga soobaxay xili danbe oo caawa ah ayaa laysla qaatay jihooyin iyo qorshayaal cusub oo lagu xoojinayo nabadgalyada deegaanka.
Gabagabadii ayaa xafiiska nabadgalyada DDS usheegay in lawado adkaynta iyo dhismaha ciidamada sirdoonka deegaanka oo aqoon ahaan iyo anshax ahaanba dhisan islamarkaana lagaadhsiin doono guud ahaan deegaanka, iyadoo iskaashi lala sanaynayo haayadaha heer qaran.